छाती भन्दा बाहिर मुटु भएपनि उच्च छ मनोवल, नजन्मिँदै मर्छिन् भन्ने डाक्टरहरु समेत चकित ! – Post Patrika
रिन लागेकोले मात्र १ लाख २०हजारमा २२०बाईक १८ मोडेलको किनेले सम्पर्क गर्नुहोला ।
कार हल्लिरहेको देखेर प्रहरी पुग्दा भित्र जोडी मस्त, प्रहरीसँगको बयानले झनै चकित बनायो
यस्तो अवस्था कसैको नआओस् मनमा अलिकती पनि दया माया छ भने माथि लाइक गरी गर्नुहोला
कोरोनले लियो एकैघरका दाजुभाईको ज्यान , को’रोनालाई ख्यालठट्टा नमानौ सबै सुरक्षित बसौ
सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई पसिना, अनिष्टको संकेत [ भिडियोसहित ]
साउदीमै पसिना बगाउँदै थिए, फेसवुक हेर्दा अचानक आफ्नी श्रीमतीले अर्कैको घुम्टो ओढेको फोटो देखे (भिडियो हेर्नुस्)
रेलकाे ठ’क्करबाट अमेरिकामा नेपाली चेलीको मृ’त्यु
कुन अभिनेत्रीको उचाइ कति बलिउडमा हेर्नुहोस् ।
मुख्य पृष्ठ /International/छाती भन्दा बाहिर मुटु भएपनि उच्च छ मनोवल, नजन्मिँदै मर्छिन् भन्ने डाक्टरहरु समेत चकित !
छाती भन्दा बाहिर मुटु भएपनि उच्च छ मनोवल, नजन्मिँदै मर्छिन् भन्ने डाक्टरहरु समेत चकित !
अमेरिकामा रहँदै आएकी ११ वर्षीया भिरसाव्या बोरुन गोनचारोभा एक अचम्म लाग्दो समस्याबाट ग्रसित छिन्। उनको मुटु प्राकृतिक रुपमा हुने ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा छ। सामान्यतया मुटुलाई करङ्गले ढाक्ने भएपनि उनको मामलामा भने मुटु फरक ठाउँमा छ।
उनको मुटुलाई एकदमै पातलो छालाले मात्र ढाकेको छ। उनको मुटुलाई बाहिरैबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ। डाक्टरहरुका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘पेन्टालोगी अफ क्यान्ट्रेल” भनिन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यस प्रकारको शारीरिक दुर्बलता निक्कै नै कम व्यक्तिहरुमा हुने डाक्टरहरु बताउँछन्। यस्ता समस्या भएकाहरुमा करङ्ग र पेटको मांसपेशिहरू राम्रोसँग विकसित हुन सक्दैन। करङ्ग र पेटको मांसपेशिहरू राम्रोसँग विकसित नभएकै कारण गोनचारोभाको मुटु प्राकृतिक ठाउँ भन्दा अन्यत्र रहेको बताइन्छ।
रुसमा जन्मिएकी गोनचारोभा पछिल्लो समय अमेरिकामा छिन्। मुटु बाहिरै भएका कारण उनले विभिन्न कठिनता सहनु परिरहेको छ। उनको दैनिकी अन्य बालबालिकाहरु भन्दा फरक रहने गर्छ।
निक्कै नै दुर्लभ समस्याबाट ग्रसित उनले अहिले सम्म धेरै समय अस्पतालमा बिताइसकेकी छन्। तर पनि उनले हिम्मत भने हरेकी छैनन्। उच्च मनोवलका साथ उनी यस समस्यालाई कमजोरी बन्न नदिने बताउँछिन्।
“अक्सिजन लेभल कम हुँदा मलाई गार्हो हुन्छ। त्यससमयमा मलाई रिंगटा पनि लाग्छ। तर, मलाई सक्रिय रहन र आफ्ना साथीहरूसँग नाँच्न-गाउन मनपर्छ”,उनी भन्छिन्,”मेरो मुटु फरक छ, तर यसले मलाई पूर्ण रूपमा अद्वितीय बनाएको छ र मलाई त्यो मन पर्छ। म यस अवस्थालाई मेरो कमजोरी हुन दिने अवस्थामा छैन”
छोरी गोनचारोभाको विशेष अवस्थाका कारण उनकी आमा डारी अलिकति पनि विचलित छैनन्। गोनचारोभाको मुटु छोप्न मिल्ने उपचारको खोजिमा उनी छन्। त्यसैको लागि नै आफूहरु रुसबाट अमेरिका पुगेकी उनको भनाई छ।
आफ्नी छोरी लाखौंमा एक रहेको उनी बताउँछिन्। आफू गर्भवती हुँदा डाक्टरहरुले गोनचारोभाको गर्भमै अथवा जन्मिसकेपछि मृ-त्यु हुने बताएको उनी अझै पनि सम्झिन्छिन्। भगवानको कृपाले डाक्टरहरुको अनुमान गलत सावित हुन पुगेकोमा उनी ज्यादै खुशी छिन्।
“डाक्टरहरुले मेरो छोरी गर्भमै अथवा जन्मिसकेपछि म-र्छिन् भनेका थिए। तर, हेर्नुहोस् आज उ यति ठूलो भैसकी।”,डारी भन्छिन्,”उनी वास्तवमै एक चमत्कार हुन्।”
कोरोना खोप तयार, नोभेम्बरभित्रै प्रयोगका लागि प्रक्रिया थालिने
गंगा नदीमा फेला परेको यो माछाबाट बैज्ञानिकहरु हैरान, फैलियो डर !
सावधान ! देखिन थाल्यो कोरोनाको अर्को खतरनाक लक्षण